Ma Heshiis Baa Mise Waa Muquuno? (Maqaal) – Shabakadda Amiirnuur
June 22, 2018 1:47 pm by admin Views: 193
Ummada Soomaaliyeed kama suulin illaa iyo hadda iney hadal heyso, oo ka caraysan tahay, misana la ciishoon tahay qodobadii kasoo baxay kulankii gaabnaa ee 16 kii bishan Madaxtooyada ku dhex maray Madaxweynaha Dowladda Federalka ah, Maxamad C/llhi Farmaaji, iyo Ra’iisulwasaaraha Itoobiya, Abeey Axmed.
Shalay oo khamiis ahayd, waxaan qabuuraha Barakaat ee magaalada Muqdisho, kusoo aasnay Oday dariskeena ah oo ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya, oo la ii sheegay in markii uu maqlay heshiiska uu dhiig kar ku kacay kadibna uu xaalad miir dabool ah galay illaa uu u dhintay.
Haddaba walaalayaal, qormadn kuma falanqeynayo qodobadii war murtiyeedka, balse waxaan jeclahay inaan ku caddeeyo ama ku ballaariyo su’aasha aan cinwaanka ka dhigtay oo ah mid aan ka codsanayo qof walba oo Soomaaliyeed inuu is weydiiyo kadibna jawaab u raadiyo.
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya, markii uu ku laabtay dalkiisa wuxuu sheegay in Soomaaliya ay la midoobeyso Itoobiya, in Dekedo la siiyay, qorshahanna uu yahay mid ay isaga iyo ragga madaxda ka ah dalkiisa billaabeen, balse ay sii dhammeystiri doonaan caruurtooda, isagoo waliba ku celceliyay inuusan fashilmi doonin.
Farmaajo, dhankiisa uma hadal sida cad ee uu ninkan ula hadlay shacabkiisa, laakin arrinta kaliya ee uu bannaanka soo dhigay islamarkaana mudan inaan ku baraarugno ayaa waxay tahay, inuu sheegay inaaney Itoobiya heysan dhaqaale ay Dekedo ku maal gashato, dowladdiisuna lamid tahay, sidaa awgeedna maal gashi dibadeed loo raadinayo dekedaha!
Su’aashu waxay tahay, haddii aaney Itoobiya inala lahayn dhulkeena, sidoo kalana aaney dhaqaale inagu darsan, maxay ku muteysatay in la siiyo Afar Dekedood oo Soomaaliya ku yaalla? Waa su’aal u baahan inuu qof walba rog rogo.
Ugu dambeyntii, markaan anigu eegay arrintan waxaa ii soo baxday in Dekedaha loo bixiyay “Muquuno”. Muquuno, waa eray kamid ah luqadda Soomaaliga oo ay inta badan garanayaan suugaan yahannada iyo dadka reer miyiga ah. Micnihiisu waxa weeyaan, shey badal la’aan la bixiyay oo qof lagu maamuusay.